Ububanzi eselula yesimanje libanzi ukuze senze izinqumo, eqinisweni, ngisho simple. Kunezindlela ezihlukahlukene amamodeli kuhluke intengo, umakhi Ukucaciswa. Ngisho bakhethe phakathi kwezindlu metal kanye zakudala "plastic" ngisho simple.
Kulesi sihloko sizoxoxa ngendlela ukugxila zindlela ezimbili ezibalulekile kakhulu - anoma ibhethri bese ikhamera. Ukuze umfundi ke kulula uzulazule kule ndaba Yiqiniso, njengembuyiselo sizonikela izibonelo kumadivayisi ahlukahlukene.
Isisekelo sanoma ibuphi Ukukhetha
Okokuqala, ukuthi umsebenzi noma yimuphi umsebenzisi - ukukhetha tablet ezingabizi kakhulu ngekhamera ezinhle, ukusetshenziswa ongaphakeme ibhethri kanye nokusebenza okusezingeni. Kunengqondo ukuthi kulowo nalowo kithi, ukuthenga idivayisi yeselula kwanoma yiluphi uhlobo, sithambekele ekubeni sivele okulindele ukusebenza kwakhe engcono. Kodwa akwenzeki.
Lapho kokuzikhethela, kufanele umhlatshelo okuthile. Uma sikhuluma yokufuna kumadivayisi ephezulu ezivela ezinkampanini ehola, kuleli cala, thina nginikele ngemali. Uma ukufuna esibhebheni isabelomali ngekhamera ezinhle kungaba "ubuhlungu" ukusebenza zayo bese yakha izinga.
Ngakho-ke, injongo ikhasimende ngalinye ekufuneni nokuthola okufanayo "kusho segolide." Ngokukhetha ke, uyakwamukela kudivayisi ukuthi kufanelekile zonke izicelo. Kulesi sihloko sizozama Orient umfundi nje ukusesha imodeli enjalo.
Ibhethri e ithebhulethi
Ake uqale nge ibhethri, ngoba inquma obuphelele zedivayisi. Nokho, amakhasimende amaningi, ungayithathi kalula lokhu ipharamitha, njengoba umthamo webhethri omane akayikhiphi value. Futhi ukuzonda ngesizathu esihle.
Kusukela ngaleso sikhathi, ukuthi kubaluleke umthamo webhethri umakhalekhukhwini wakho, uzobona ezinsukwini lokuqala ukusebenza naso. Mhlawumbe kube into eza kuqala kuwe - ukuthenga esibhebheni kanye nekhamera ezinhle; kodwa endabeni umthamo ongaphakeme ibhethri ngemuva kwamahora ambalwa ukuqopha kudivayisi ahlale, futhi kuyomelwe kodwa akukho okunye angakwenza ukubeka eceleni bese ulinda kuze kube sizokwazi ukuxhumeka kunethiwekhi. Believe me, lokhu ziyacasula.
Ngakho-ke, kumelwe sizame ukuthola imodeli ukuthi uzoba ibhethri capacious ngaphezulu, bakwazi ukubamba icala eside. Nokho, kufanele kuqondwe ukuthi ubude idivayisi kuncike zindlela ezimbili - icala rate nebhethri umthamo. Uma kuwukuzikhohlisa unamahlangothi ezincane (lapho abakhiqizi bafuna nokwenza amapuleti ukujiya ubuncane), ngokulandelana, bonisa obunamandla, ngeke.
Ngakho, kumelwe kube nokulinganisela phakathi kangakanani isikhala iyadingeka ukuze ibhethri, bese ezenziwa ngayo isikhathi esingakanani ukwazi ukunikeza umsebenzi igajethi.
Sithathe ibhethri ngaphansi kwesikrini
umthamo webhethri, okuyinto sekushiwo, ulinganiswa milliamp-amahora. Ngokubhala, lesi silinganiso ubizwa ngokuthi "mah". Wakhe ubona ezibekiweko iyiphi kuthebulethi yakho noma ifoni. Kukhula lesi silinganiso, isikhathi eside uzokwazi ukusebenzisa imishini ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe.
Nokho, kukhona nesinye isici - icala ukugeleza rate. Yena, incike amakhono idivayisi. Uma, yithi, elula ikhibhodi Ibhethri yefoni ekugcineni 700mAch ngeviki, ke-7 inch tablet yebhethri 3500 mah - kosuku lomsebenzi.
Kukhona esimweni esinjalo: ibhethri Kufanele kukhethwe for usayizi wokubonisa. Ngokwesibonelo, i-3500 mah 7 amayintshi nokuningi - lokhu kungokwemvelo; 8 - 4200 mah, 9--10 intshi amapuleti izosebenza obuhle "6 no-7 thousandths" amabhethri. Khumbula, sikhuluma igajethi yakho ukuba ngokwanele okungenani komsebenzi wosuku.
Ukukhetha Isobho, ungakhohlwa ukuthi ithebhulethi nge ikhamera ezinhle nebhethri kuyoba ezibizayo. Yiqiniso, ukusetshenziswa kuyoba ukhululekile okuningi.
Mayelana ukubala umthamo webhethri, kuncike idayagonali kwesikrini, sakhumbula yokuthi isikrini "edonsa" ingxenye eyinhloko ukukhokha. Nokho, futhi kuba - akulona ifomu elilodwa kwebhethri. Kunezinye izici, ezifana CPU kusebenta. Futhi empeleni, kanjani ngokuvumelana nokusebenza yokugcina, kuthinta isikhathi yedivayisi okukodwa.
A uphawu lokuthi wokugaya e ithebhulethi akusebenzi ngempumelelo, kuba okweqile. Kuziwa, njengoba umthetho, esimweni izicelo "okukhulu" ukuthi kuthathe izimali eziningi.
Njengoba kufakazelwa lobuya abasebenzisi, ukuze bagcine inkinga enjalo kungaba phezu kudivayisi isabelomali ekilasini, ezifana Lenovo eshibhe, amanye amamodeli Asus, Samsung nezinye izinkampani. Lo mkhuba ukuthi lapho igajethi kungokwalabo ingxenye ephansi intengo, icala ukugeleza nokwenza has ephansi, ngakhoke Ibhethri ihlala isikhathi sifushane.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuncoma umsebenzi models iwuhlelo efana imikhiqizo Apple, "ephezulu" amadivayisi kusukela Lenovo, Samsung, i-Sony nezinye izinkampani. Lapho, ngaphezu eliphezulu umthamo amabhethri, kukhona isici nokwenza zedivayisi, okwandisa amathuba tablet.
Amakhamera e amaphilisi
Nokho, kuthiwani-ke ngomklamo ibhethri, mhlawumbe, zonke licacile: sibheke ekilasini zedivayisi futhi ukukala umthamo webhethri (ulinganiswa mah). Futhi kuthiwani ngezinye eqakathekileko - ikhamera igibele ithebhulethi?
Kulesi senzakalo, Ngithanda aveze ukuthi amakhamera-Tablet PC efakiwe, njengoba umthetho, ababuthakathaka. Endabeni engcono, kukhona analogue waleyo Smartphones. Kule ndaba, silindele eliphezulu images kusuka iningi amadivayisi akudingekile.
Futhi uma kuziwa phambi Ikhamera "selfie", izinga layo, njengoba umthetho, it ihambelana inkinga: isithombe esithathwe bekude abaseduze, kuvela kahle. Njengoba nokubuyekezwa, amapuleti nge ezinhle ikhamera ebheke phambili - kungcono cishe yonke "flagships", kanye amanye amadivayisi kusukela "phakathi" ingxenye: Samsung, amadivaysi kusuka Asus, LG.
Kodwa kwikhamera enkulu ukuthi kungathatha izithombe indawo, ezihlukahlukene izigcawu ezimbi (ngokuqinile noma kakhulu) ovuthayo, njll, akuzona njalo phezulu kumsebenzi. Nalapha, ikakhulukazi ithebhulethi zamanani aphansi.
Ngokuvamile, igajethi kuyakhethwa isibalo "megapixels." Lokhu - ipharamitha esibonisa isinqumo kwekhamera yedivayisi. In izicelo eziningi, kuyahlukahluka ku ezahlukene 5, 8 noma 12 amayunithi. Kuthathwa ngokuthi elikhulu ukubaluleka, izithombe ikhamera kwenza ngcono. Nokho, lokhu akusho ngaso sonke isikhathi kunjalo.
indima ebalulekile uma ufuna i-tablet ngekhamera ezinhle, udlala matrix. Lona isici eziyisisekelo wonke kudivayisi unesibopho ukudala isithombe. Ikhwalithi umsebenzi walo ukuthi yiziphi imifanekiso etholwe. Uma ithebhulethi, lapho izici ahlelwe zonke "12 M" kuyinto ezishibhile-matrix Chinese, ikhwalithi yesithombe kuyoba amabi. Ngakho-ke, ukuze uzulazule, ikhamera ezinhle tablet kufanele kube umenzi.
Ngokwesibonelo, ikhamera eyehlukile ume Sony: inkampani waziphatha esikhiqiza kubo, ngisho ukuthengisa Apple futhi eziningi nezinye abakhiqizi. Nalapha futhi, Apple iPad, Samsung Tab S8.4 kanye Galaxy Note, LG, Sony Xperia Z3, Meizu Mi Pad, Huawei MediaPad babe amakhamera ezinhle (ngemodeli ngayinye - ikhumbula intengo yayo, vele). Nakuba namadivayisi amaningi kusuka Lenovo (A3000, isibonelo), kanye nezinkampani eziningi ongaqashelwa Chinese okwenza amaphilisi, ngezithombe etholakala ungeyena nqampuna umhlabeleli. Okungenani, impendulo yomsebenzisi kuboniswa.
Ikhamera yevidiyo kanye flash
Lapho ufuna kwedivayisi kwamanethiwekhi bethwebula beqopha ngeselula ividiyo, ungakhohlwa mayelana kokugqashuka. Njengoba nokubuyekezwa, ukusebenza phezu thebhulethi zibelula, nezithombe ekukhanyeni ongaphakeme kukhona qualitative xaxa. Flash akuyona kuphela endleleni futhi an lentengo isilinganiso amagajethi (i-iPad, Samsung Qaphela, Samsung Tab), kodwa futhi ekhona amaphilisi engabizi (Nomi, Umsizi, Impression, Ainol , MYTAB nabanye). Ngakho sithathe khompyutha ukukhanyisa akunzima kakhulu ngoba izithombe.
Omunye umbuzo - lena ikhamera yevidiyo. Lapha udinga hhayi sibheke inani megapixels, nevidiyo isixazululo. A inkomba izwi lesinqumo 720p, kakhulu - 1080p (HD - izinga). Ngakho, ngokwesibonelo, kususa Asus Eee transformer noma okufanayo Apple iPad.
Empeleni, ukukhetha idivayisi ezokwenza ukwanelisa wena, ukwenza akunzima kangako. Noma ukucacisa intengo kanye umkhiqizi futhi sithatha, isibonelo, i-tablet "Samsung" ngekhamera ezinhle - yimuphi Galaxy Tab Pro, isibonelo. Enye - ukufuna nemingcele lobuchwepheshe kusukela amadivaysi atholakalayo bese ukhetha into efana Asus Nexus, Huawei futhi Meizu. Phakathi amamodeli iimsebenzi eyaziwa kancani, kanye phakathi imikhiqizo Chinese, futhi ungathola eziningi kumadivayisi ayakufanelekela.
Izibuyekezo kuzosiza eMpumalanga
Futhi, ungakhohlwa ukuthi lifunde izibuyekezo. Ukuze idivayisi ngamunye namuhla ungathola eziningi izincomo labo kakade kwadingeka ithuba ukusebenza naye. Kuyasiza uthole olunye ulwazi mayelana nendlela idivayisi siziphathe umkhuba ukuthola tablet ngekhamera ezinhle futhi flash, futhi ukwazi lokho amaphuzu Kumele kuqashelwe ukuthi i-ohlangothini banamandla noma babuthakathaka isezingeni umshini othile.
Uhlolojikelele Supra M727G. Izici, ukubuyekezwa, nokuvula
Ukuze lokho ukulungiselela, uma babona umlilo ku-Abimeleki ngephupho?
Ukulungiselela i-Multivitamin "Neurobion". Imiyalo yokusetshenziswa
Recipe Inkukhu Tabaka
'Meridia' imithi. Izibuyekezo. isicelo